Xiriirka FIFA oo lagu helay xadgudub wayn & xukun culus oo lagu ridey! (Maxaa dhacay?) | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Xiriirka FIFA oo lagu helay xadgudub wayn & xukun culus oo lagu...
Xiriirka FIFA oo lagu helay xadgudub wayn & xukun culus oo lagu ridey! (Maxaa dhacay?)
(Rio de Janeiro) 31 Okt 2021 – Kaddib 7 sanadood oo dagaal maxkamadeed ah, waxaa FIFA ugu dambayn lagu xukumay inay bixiso lacag magdhow ah oo la siinayo 2 nin oo hindisey dareeraha baaba’aya ee lagu calaameeyo laadadka xorta ah.
Go’aankan oo ay riddey Maxkamadda Cadaaladda ee Rio de Janeiro, ayaa FIFA looga doonayaa inay 15,000 oo doollar ka bixiso ciyaar kasta oo loo adeegsadey muddadaa, gaar ahaan wixii ka bilaabma KA2014 lagu qabtay Brazil.
Waa lacag gaaraysa qiyaastii 120 milyan oo euro. Taasoo la siinayo labo nin oo uu heshiis uga baxay Guddoonkii sharaf dhacay ee FIFA, Joseph Blatter oo heshiiskan galay 2014-kii, magacyadooduna waa Pablo Silva iyo Haine Allemagne.
Sababta FIFA xukunka loogu ridey ayaa ah inay raggan ku samaysay xadgudub dhanka wax soo saarkooda ah, iyadoo 44 dal ka ogolaatay inay soo saaraan qalabkan iyadoo aan wax tixgelin ah la siinin ragga hinsidaha lahaa.
Waxaa sidoo kale FIFA lagu helay inay qarisay astaanta ama loogada raggan marka ay agabkan isticmaalayso.
Previous articleTOOS u daawo: Inter Milan vs Udinese – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleTurkiga oo weli halkiisii kasii wada beegsiga 10 Danjire oo reer Galbeed ah (Tillaabo jir-xumo ah oo uu qaaday)